Pringles သည်နာနတ်သီး Habanero အရသာများကိုစတင်ခဲ့သည် - Potatoes News
Pringles သည်နာနတ်သီး Habanero အရသာများကိုစတင်ခဲ့သည်
NEW PRINGLES®လှိုင်းတံပိုး HABANERO
Pringles ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောမိခင်ကော်ပိုရေးရှင်း Kellogg ကုမ္ပဏီသည်ယခုနွေရာသီအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ Pringles Wavy နာနတ်သီး Habanero.
အဆိုအရ ကုမ္ပဏီဤ Pringles တီထွင်မှုသည်မက္ကဆီကိုနှင့်ဟာဝိုင်ယီကဲ့သို့အပူပိုင်းဒေသများမှလှုံ့ဆော်ပေးပြီးမွှေးကြိုင်သောအနီရောင်နာနတ်သီးမွှေးကိုမီးခိုးငွေ့ habanero ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Pringles အသစ်သည်အလွန်ထူခြားသော၊ ထူထဲ။ လှိုင်းတိုသောကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသောကြောင့်၎င်းသည်နွေရာသီကိုမျှော်လင့်ပြီးအရသာအတွေ့အကြုံသစ်များကိုစိတ်ဝင်စားသောစားသုံးသူများအားဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
"Pringles မှာမော်ကွန်းအရသာပေါင်းစပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်၊ အပူပိုင်းဒေသမှလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဒီ crisps အသစ်တွေဟာလုံးဝခြွင်းချက်မရှိပါဘူး။ အရသာနှင့်စပ်သောအရသာသည်နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးအားလပ်ရက်ခရီးတွင် snackers များပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီးအိမ်နောက်ဖေးကင်နှင့်ဒေသခံကမ်းခြေများမှထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်တူသည်ဟု Pringles စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Gareth Maguire ကပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Pringles သည်ပရိတ်သတ်များအားဟာဝိုင်အီနှင့်မက္ကဆီကိုသို့အပူပိုင်းလွတ်မြောက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည် Pringles Wavy Pineapple Habanero ချစ်ပ်များ၏ဘူးတစ်ဘူးကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ပရိတ်သတ်များသည် ၂၀၂၁၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင်သူတို့၏လက်ခံရရှိမှုပုံကိုရိုက်။ Kellogg ၏မိသားစုဆုများသို့တင်ခြင်းအားဖြင့်ခရီးစဉ်တစ်ခုအနိုင်ရရှိရန်အခွင့်အရေးရနိုင်သည်။ တရားဝင်စည်းမျဉ်းများကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ဒီမှာ.
ဤသည် Pringles အတွက်ပထမဆုံးတီထွင်မှုမဟုတ်ပါ။ ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ် by Potatoes News။ အများအပြား Pringles အရသာအများအပြားပြီးသားကုမ္ပဏီကစတင်ခဲ့ပါပြီ။
Pringles Wavy Pineapple Habanero ကိုအမေရိကန်၊ Walgreens နှင့် Duane Reade စတိုးဆိုင်များနှင့်အွန်လိုင်းတို့တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်၊
DLG ၏ယူကရိန်းအာလူးနေ့ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၆-၂၇ ရက်တွင်ယူကရိန်း၌ကျင်းပမည်
android အတွက်အာလူးသတင်းမိုဘိုင်း app
Europatat ကွန်ဂရက် 2021
PASTEURIZATION - အားလုံးလုံခြုံရေးအကြောင်းပထမ ဦး ဆုံး
မင်းသားအက်ဒွပ်ကျွန်းအာလူးဘုတ်အဖွဲ့သည်ပိုးသန့်ဆေး ၀ န်ဆောင်မှုများပပျောက်ရေးကိုရှုတ်ချသည်